mandimby maharo | misonga… | Page 2
03 May: ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara.
Fihaonana tao amin’ny Ivongazety malagasy no nentina nankalazana ny Andro isaisam-pirenenena ho amin’ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety teto Madagasikara, androany 03 May 2014. Lohahevitra dinihina amin’ity taona ity moa ny hoe : Ny fahalalahan’ny serasera ho an’ny ho avy tsaratsara kokoa;fandraisan’anjara amin’ny tetiandro ho an’ny fampandrosoana aorian’ny 2015. Tonga nanatrika ity fihaonana ity ny Minisitra ny […]
Read more "03 May: ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara."
01 May: Mbola be no tsy an’asa eto Madagasikara
Fetin’ny Mpiasa, andro iraisam’pirenena ho an’ny asa. Samy anarana nomena ity andro ity mba handinihana ny tontolon’ny asa ity ireo. Raha tolona sendikaly no niatombohan’izany fanamarihana izany dia tsy ny sendikà intsony no mila mifantoka ny amin’ny olana mahazo ny mpiasa, sy hy olana eo amin’ny sehatry ny asa fa ny fanjakana sy ireo voakasik’izany […]
Read more "01 May: Mbola be no tsy an’asa eto Madagasikara"
Kolotsaina: Vitsy ny Boky Atonta eto Madagasikara
23 Aprily, andro iraisam-pirenena ho an’ny Boky. Tsenabe ny Boky ny nentina nanamarihana izany teto Madagasikara. Izany dia nokarakaran’ny Fikambanana Mampiely Baiboly Malagasy sy ny fikambanan’ireo mpanota boky eto Madagasikara ny 22-25 Aprily lasa teo. Andiany fahafolo ity nokarakaraina ity ary teo amin’ny zaridainan’Antaninarenina, toy ny isan-taona ihany, no nanaovana azy. Tranoheva 14 no nandrafitra […]
Read more "Kolotsaina: Vitsy ny Boky Atonta eto Madagasikara"
Ireo Nosy Eparses; Fanazavana Entin’ny Manampahaizana sy Mpahay Lalana Malagasy.
Akon’ny Valandresaka narahana adihevitra momba ireo nosy Europa, Bassas da India, Juan de Nova, ireo nosy Glorieuses, ahitana ny Grande Glorieuse sy Lys, ary Tromelin ity entina ho antsika ity. Fanazavan-kevitra natao ny 24 aprily 1014 tao amin’ny efitrano fivorian’ny Ministeran’ny raharahambahiny Anosy. Indro ary ny fanazavana nentin’Andriamatoa Raniriharinosy Harimanana, Mpahaylalana sady filohan’ny SECES. Anisan’ny […]
Read more "Ireo Nosy Eparses; Fanazavana Entin’ny Manampahaizana sy Mpahay Lalana Malagasy."
Ny 18 Aprily 2014 no natolotra ireo mpikambana ao amin’ny governemata ny Repoblika faha efatr’I Madagasikara. Mpikambana izay nofidian’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina araka ny tolotra nataon’ny Praiminisitra Kolo Roger. Mijoro avokoa izany izao ny rafitra hitondrana an’I Madagasikara ao anatin’ny 5 taona Manaraka. Ireto avy ary ireo mpikambana ao amin’ny governemanta ireo, araka ny didim-panjakana […]
Read more "Madagasikara: Nandray Baiko avy Hatrany ny Governemantan’i Kolo Roger."
Natolotr’i Hery Rajaonarimampianina, Filoham-pirenen’i Madagasikara ny vahoaka malagasy ny Praiminisitra hiara hiasa aminy; Notanterahina teny Iavoloha androany 11 Aprily ny fanolorana ity praiminisitry ny Repoblika fahefatra ity . I Kolo Roger no lany tamin’izany. Novakiana teo imason’ny rehetra ny didimpanjakana mirakitra izany: Didimpanjakana manendry ny Praiminisitry ny Repoblika faha efatra Anarana 18 no nisy nanatitra […]
Read more "Madagasikara: Voatendry ho Praiminisitra i Kolo Roger"
« Famerenana ny hasin’Antananarivo ». io no fototry ny asa rehetra tanterahin’ny Fivondronana Antananarivo Renivohitra tarihin’ny Filohan’ny Delegasiona manokana Ny Hasina Andramanjato. Loha-laharana amin’izany ny fanalana ny fako misavovona efa ho volana maro izay. Eo koa ny fandaminana ny fifamoivoizana. Ho jereny manokana koa ny fandaminana ny tsena sy ireo mpivarotra amoron-dalana, ka isan’ireny ny […]
Read more "Ny Hasina Andriamanjato: lasa Mpanenjika Makorelina."